Reer Adalow Tashada Ilaah baa talada Hayee « CEELBARDAALENEWS.COM
« Waxaan la yaabay Websiteska Reer Awdal.
Xarunta Dad-Qalatada ee ina Raage-qaate waa in la xidhaa lana soo qabtaa dhagar qabaha »
Reer Adalow Tashada Ilaah baa talada Hayee
Prof. Ahmed Ismail Samatar ayuu ahaa kii habeen hore iyo habeenkii ka sii horreysayba laga daawanayey TVga Universal ee caalamiga ah. Hadalla waxa uu ku soo gaba-gabeeyey, ereyadii Abdirazaaq Xaaji Xuseen uu ka soo xigtay ee ahaa ….. Somali way u dhammaatay. Prof. Ahmed isaga oo cadhaysan waxa uu gab-gabadii hadalkiisa ku soo gunaanaday : kuwii Somaliland sheeganayey way dubaaxinayaan waana taa ay is qalanaya. Markii uu sidaa lahaana waxa uu raaciyey gacantiisa oo uu hunguriga mariyey.
Baaba’aa dhacay ayaabay dadka qaarna ka xanaaqsan yihiin Calan baryo dawladi lahayd, oo boodhka laga soo jafay. Oo ay rabaan in ay weeciyaan amma qariyaan foolxumada ay dad-qalato samaysay. Cadhada maantuna waxa ay keeni doontaa in calammo badan la samaysto, kani dadka lagu hoos qalayana la gubo. Waxanan ilaahay ka baryeynaa in ay dhulka ka dhacdo ta Xamar tu kadarani kana dhacado Boorama, Hargeysa iyo Burco iyo inta dawlad isku sheegga Somaliland ee dadka waalani ku nool yihiin. La is xaaqo, la is gubo, la is qal-qalo. Oo xumaha loo kala badiyo. Baaskaa ayey ku caano badin. Arliyana sidaasi ayey dantu ugu jirtaa. Sidan lagu jiraana waa dhuxul dambas huwan, oo lagu dilayo, haddana lagu sasabayo.
Waxba yaan dawlad la ii sheegan, waxba yaan la ii been guurin. Doqonniimadayda dhadaan roob mooday, been baan run mooday. Oo aan in badan u hiilliyey, ula dagaal galay, oo aan dantooda qurxiyey. Maanta iigama dambayso waxanan diyaar u ahay in aan wiilashayda xaqdarrada lagu dilay ku madho, iilka la galo…oo aan sida Maraykanka iyo Ingiriiska ka sheekeeyo sannaddo. Sugi maayo inta raggayga la haldhabaysanayo, sugi maayo inta sida dadban la ii gawracayo. Uur xumo ayaa i gashay, mana deg dego, mana garan waayo sida aan yeelayo. Sidaa Prof. Ahmed Ismail sheegay ayaanan aamminsanahay oo aan leehay way dhammaatay. Diyaarna waxaan u noqonayaa in aan isku dhammaanno amma raggii dad-qalatada u xuub siibtay madasha la keeno.
Awdaley adiga ayey talo ku joogtaa. Nasiib darraduna meesha ay taallaa waa Boorama iyo Laascaanood. Gunnimo ayey garabsadeen, oo ay cagta hoosteeda u galeen. Rag dhulka xoreeya may waayin, ee waa laga siyaasad batay, oo loo been guuray. Reer Hebel xadka ay sheegtaan waa min Saylac illaa iyo Garawe hoosteeda. Tase ay ku macaashi jireen waa talada Gadabuursi. Maantase waxa aan leenahay cid-wallaay is xoreeya. Daraawiishi ha tashato galbeedna ha tashado, xad-gudubna yeyna samayn.
This entry was posted on July 22, 2009 at 12:54 am	and is filed under 1. Tagged: 1. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.